AMIA ၏ 2019 ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစာတမ်းဖတ်ပွဲဇွန်လ5| NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဇွန်လ 2019 များအတွက် AMIA ရဲ့5ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစာတမ်းဖတ်ပွဲသတ်မှတ်မည်
အဆိုပါ 2019 ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစာတမ်းဖတ်ပွဲ (Das), ကတင်ပြ Image ကို Archivists Moving ၏အစည်းအရုံး (AMIA), စပီကာများနှင့်တင်ပြချက်များတစ်ဦးအပြည့်အဝနေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Das ဇွန်လ5အပေါ်မန်ဟက်တန်အတွင်းမော်ဒန်အနုပညာ (မိုမာ) ၏ပြတိုက်မှပြန်လည်ရောက်ရှိ။
Das အဖွဲ့အစည်းများ, အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူတူပင်မီဒီယာစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ array ထဲကနေချဉ်းကပ်၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းပေးထားပါသည်။ တစ်ဦးအမှုလေ့လာမှုချဉ်းကပ်မှုကနေအဖြစ်တင်ဆက်အတွက်စိန်ခေါ်မှုအကြောင်းအရာများချဉ်းကပ်, Das ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းနည်းပညာများအဖြစ်အသိုင်းအဝိုင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကိစ္စများ tackles ။
နစ်ခ်ရွှေ, Das ကုလားထိုင်, "ဒါဟာအချိန်အကြောင်းကိုပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်ပေးထားဖြစ်ကြောင်းအချိန်ကန့်သတ်မှုရှိပါတယ်; ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်ဖြည့်ဆည်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုရရှိနိုင်ပါသည်အချိန်ကန့်သတ်ငွေပမာဏနှင့်အတူစောင့်မတော်မူသေချာအောင်နာရီဆန့်ကျင်ပြိုင်ကား။ ငါတို့သည်သေချာကျနော်တို့နောက်ဆုံးပေါ်ပြောပြလိုပါသည်နှင့်ဗန်းစကားအပေါ်မြန်နှုန်းအထိဖြစ်ကြစေရန်ဖြုန်းအချိန်ကိုမမေ့မလြော့ပါ! "
"ပုံရိပ် Moving အဆိုပါယာယီဒိုမိန်းတစ်ခုအခမ်းအနားဖြစ်တယ်, တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းအဖြစ်ကျနော်တို့အချိန်ကြာကြာကာလ၏သင်တန်းကျော်ကဒီယာယီအရင်းအမြစ်ကြီးကြပ်မှုဖြင့်တရားစွဲခံရနေကြသည်။ အသစ်ကနတ်ကတော်အတွက်အချက်အလက်တွေကိုသိမ်းထားဖို့အချိန်ပမာဏကိုချုံ့ခြင်းနှင့်သေချာကျနော်တို့အချိန်စမ်းသပ်မှုရပ်နိုင်ကြောင်းသမိုင်းကိုထိန်းသိမ်းပိုင်ခွင့်နည်းလမ်းများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်အောင် Das ၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာသင်ယူနှင့်ကြီးထွားဖို့ဆက်လက်ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူနေ့ကိုဖြုန်းလာကြ၏။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းမဖြစ်လိမ့်မယ် "ဟုအစီအစဉ် Co-ကုလားထိုင်ဂျေမီ DiVenere ကဆက်ပြောသည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအခန်းကဏ္ဍနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအသိုင်းအဝိုင်းအကျိုးစီးပွားလက်ရှိခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးကနေရေးဆွဲပုံမှန်ပီ။ အဆိုပါ 2019 Das lineup ပါဝင်သည်:
Hyunjun ပန်းခြံ, Catalog DNA ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူ
အီဗိုလူးရှင်းအနှစ်ဘီလီယံပေါင်းများစွာကဒေတာသိုလှောင်မှုနဲ့အပြိုင်တွက်ချက်မှုတစ်ခုစံပြအလတ်စားလုပ်ကြောင်း DNA တွင်ဝိသေသလက္ခဏာများအတွက်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, DNA ကိုနှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏တစ်ဦးကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဘဝနှင့်အတူ SSDs တဦးသန်းဆဒေတာသိပ်သည်းဆရှိပါတယ်။ လူသားတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သည်အမှန်တကယ်တစ်ပြိုင်နက်တွက်ချက်မှုများထရီလီယံတစ်ခုချင်းစီကိုယခုအချိန်တွင်စေလွန်ကဲကဲအပြိုင် DNA ကို-based ကွန်ပျူတာများဥပမာဖြစ်ကြသည်။ ဒီဂျစ်တယ်ဒေတာသိုလှောင်မှုနှင့်ကွန်ပျူတာများအတွက် DNA ကို၏တနျခိုးအသုံးချပေါက်ကွဲစေတတ်သောဒေတာဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့လက်ရှိအသက်အရွယ်အတွက်ထို့ကြောင့်အကြီးအအကျိုးစီးပွားတစ်ဦးခေါင်းစဉ်ဖြစ်လာသည်။ catalog ကဤ application များအတွက်ပထမဦးဆုံးကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သော DNA ကို-based ပလက်ဖောင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် 2019 ထဲမှာအပေါ်ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းစတင်နှစ်ခု MIT ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတည်ထောင်အစောပိုင်းဇာတ်စင် startup ဖြစ်ပါတယ်။
Lizzie Jongma, စစ်ပွဲစုစည်းမှုများဒုတိယကမ္ဘာစစ်အဘို့အအကြီးတန်းအိုင်စီတီစီမံကိန်းခေါင်းဆောင်ဒတျချြကွန်ယက်
စစ်ပွဲစုစည်းမှုများဘို့ဒတျချြကွန်ယက်၏ဘုတ်အဖွဲ့တွမ် De Smet, အသံများနှင့်မျှော်မှန်းချက်များအတွက်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးနယ်သာလန် Institute နှငျ့ဒါရိုက်တာ
နယ်သာလန်နိုင်ငံစစ်ပွဲစုစည်းမှုများဘို့ဒတျချြကွန်ယက် WW2 အကြောင်းကိုဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနဲ့အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းအတူတကွဆောင်တတ်၏နှင့် semantic Technologies ကသုံးပြီးအရင်းအမြစ်များကိုဆက်သွယ်။ အဆိုပါနယ်သာလန်ကိုဖွင့်ဖို့ဒေတာစီမံကိန်းများ၏ရှည်လျားသောအစဉ်အလာရှိပါတယ်။ အဆိုပါကွန်ယက်ပြတိုက်အတွင်းမှာပဲစာကြည့်တိုက်များနှင့်မော်ကွန်းယခုသူတို့ collection များကိုပေါင်းစပ်နှင့်ဤပစ္စည်းများကိုများအတွက်အသုံးပြုသူဖော်ရွေ, လူ့-နားလည် Web Portal နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ချန်နယ်များကိုဖန်တီးရန်အစရှိသစ်တစ်ခုဇာတ်စင်ဝင်ရောက်နေကြသည်။
ခြင်းသည်အတွက် Tryanny ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို (အဘယ်ကြောင့် Wikimedia Commons အပေါ်နာဇီဝါဒဖွနျ့ထုတ်ဝေရန်) နှင့် Big Data ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းထံမှအမည်များနှင့်ဘဝတွေကို (အစားဂရပ်များ) ၏အပန်းဖြေ၏ link ကိုမှဟောင်းနွမ်းဒေတာနှင့် "ရှေးခေတ်" သမိုင်းကိုရှင်းပြဖို့အသစ်သောနည်းပညာများကို၏အသုံးပြုမှုကိုစူးစမ်း။ collection များကိုချိတ်ဆက်ဖို့ thesauri အသုံးပြုခြင်းနှင့်အဘယ်ကြောင့် Sparql Endpoints စံချဉ်းကပ်မှုမရှိကြပေ။
တက္ကဆက်မိုင်နှင့်မိုင်: Austin စီးတီး Limited မှတိပ်၏ခြေသန်းနှင့်ချီထိန်းသိမ်းခြင်း
မန် Moore က, နည်းပညာဆိုင်ရာစီမံကိန်းဒါရိုက်တာ, KLRU တီဗီ, Austin
ဂျိမ်းကိုးလ်, ဗီဒီယိုအထူးကု - အကြောင်းအရာမန်နေဂျာ KLRU-TV ကို Austin
Austin စီးတီး Limited (ACL) ရုပ်မြင်သံကြားသမိုင်းနှင့်ဝိဇ္ဇာအမျိုးသားတံဆိပ်နှင့် Peabody ဆုကိုဂုဏ်ယူလက်ခံရရှိသူအတွက်အရှည်ဆုံးပြေးဂီတပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ACL မှာဖျော်ဖြေဝီလီနယ်လ်ဆင်, Loretta Lynn, Ray ချားလ်စ်, ရွိုင်း Orbison, Alison Krauss, နီးလ်လူငယ်, LCD Soundsystem, စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် Kendrick Lamar အပါအဝင်ဒဏ္ဍာရီအနုပညာရှင်နှင့်ခညျြအနှောရာပေါင်းများစွာ, featured ပါပြီ။ ACL ထုတ်လုပ် (နှင့်အပေါ်ထုတ်လွှင်) KLRU, Austin, Texas ပြည်နယ်ရဲ့ PBS ဘူတာရုံဖြစ်ပါတယ်။
ယင်း၏ 45 ရာသီတစ်လျှောက်လုံးပြပွဲ၏ထုတ်လုပ်သူဖျက်ပစ်ဖို့တိပ်ခွေနာရီထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရလဒ်များ, ဗီဒီယိုနှင့်အသံတိပ်ခွေများ၏မိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏မှတျတမျးတငျထားပါပွီ catalog များနှင့်အချက်အလက်များ၏ terabytes ၏လက်လှမ်းအဖြစ်ရာပေါင်းများစွာကိုပြန်ဖွင့်စနစ်တကျသိုလှောင်ခြင်းနှင့်စေနှင့် စီမံခန့်ခွဲ။ အဆိုပါ ACL မော်ကွန်းတိုက်အဖွဲ့ကဖွင့်, ပြ၏ဗီဒီယိုပိုင်ဆိုင်မှုအပေါင်းတို့၏ရွှေ့ပြောင်းပြီးစီးဆက်စပ်အချက်အလက်များ၏အများစုစုဝေးစေခြင်းနှင့်အဆင့် II ကိုမှအပေါ်ဖြစ်ပါသည်, multitrack နှင့်ထုတ်လွှင့်မာစတာအသံတိပ်ခွေ digitizing နှင့်ဤအားလုံး၏အဓိကအဖွဲ့နှင့်အတူပြုပုံကိုဆွေးနွေးကြမည် အများပြည်သူတီဗီဘူတာရုံဘတ်ဂျက်အပေါ် 2, နေတုန်းပဲထုတ်လုပ်မှုနေစဉ်။
သင့်ရဲ့ဒေတာများကိုရေကန်ထဲမှာငါးမျှား - သင်ဖမ်းရန် Going နေဘာတွေသိထားဘယ်တော့မှမ
Dave Ginsberg, အမြော်အမြင်နည်းပညာရှင်အမေဇုံစတူဒီယို
Callum Hughes က Post ကိုထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ, အမေဇုံစတူဒီယို၏ဦးခေါင်း
အမေဇုံ Studios ကဖန်တီးမူရင်းပြပွဲနှင့်အင်္ဂါရပ်အကြောင်းအရာပတ်လည်နှစ်စဉ်အချက်အလက်များ၏ petabytes ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအကြောင်းအရာမြစ်လက်တက်သည်ဤပစ္စည်းအားလုံးခွဲခြားခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲဖို့ဖန်တီးခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုအိုင်ထဲသို့စီးဆင်းကြသည်။ ဒါပေမယ့်သင်မည်သို့စံချိန်စံညွှန်းမီ file name တစ်ခုသို့မဟုတ် directory ကိုဖွဲ့စည်းပုံမပါဘဲပျက်ပြင်ဆင်ထားသညပိုင်ဆိုင်မှုသန်းပေါင်းများစွာစီမံခန့်ခွဲသလဲ? ဒါဟာအမေဇုန် Studios က Post ကိုထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာအဖွဲ့သည်စကေးမှာ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အဖြေတစ်ခုရှာတွေ့မှစပ်လျဉ်းသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်များ၏ဖောက်သည်ပစ္စည်းများခွဲခြားတတ်ဖို့သင်ယူစက်အသုံးချတဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြေရှင်းချက်ကိုဖန်တီးရန်ကူညီပေးခဲ့သည်အဘယျသို့ကနေနောက်ပြန်ဘယ်လိုအဆောက်အဦဆနျးစစျပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဝတ္ထုဖြေရှင်းချက်တိမ်တိုက် architected နှင့်စတူဒီယိုမျိုးစုံအကြောင်းအရာဖန်တီးမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြတ်ပြီးနေသူများကဖန်တီးသောပစ္စည်းများမူတည်ပြီးခွင့်ပြုပါရန်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း AWS နည်းပညာများချွတ်အများအပြားကိုအသုံးပြုသည်အပြည့်အဝဖြစ်ပါတယ်။
ယောဟနျသ Footen, မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာမီဒီယာ & Entertainment က, Deloitte
ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေး၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခြမ်းအတိုကောက်နှင့် buzzwords တစ်ထင်ရသောအဆုံးမဲ့ထောက်ပံ့ရေးရှိပါတယ်။ buzzword ဘင်ဂိုကစားကစားရန်လုံလောက်? ဒါပေါ့! ဒါဟာအစစ်အမှန်များအတွက် buzzword ဘင်ဂိုကစားကစားရန်သင့်အခွင့်အလမ်းပါ! စက်သင်ယူမှုသို့မဟုတ် AI အများ၏အကျိုးအတွက်မပါဘဲအရှိဆုံး TLA ရဲ့ရတဲ့၏များ၏ညှိနှိုင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုအဘို့သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ပါ။ တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဂိမ်းပြပွဲ / နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတင်ဆက်မှု၏ဤပထမဦးဆုံးလက်လွတ်မနေပါနဲ့!
Demystifying ဘာသာစကားများ Metadata
Yonah Levenson, Metadata နှင့် taxonomy, HBO ၏ Manager ကို
ထုတ်လွှင့်နှင့်မီဒီယာကုမ္ပဏီများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စီးပွားဖြစ်နှင့် Non-စီးပွားဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးအသုံးအနှုန်းများကို အသုံးပြု. မျိုးစုံဘာသာစကားစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်နေကြသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြန့်ဖြူးလိုအပ်ချက်များကိုအသံ, မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာစာသား, ထုပ်ပိုး / Display, နှင့်အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူ interfaces ဘို့ရန်တသမတ်တည်းပစ္စုပ္ပန်ဘာသာစကားများလိုအပ်ကြောင်းဖော်ထုတ်နေကြပါတယ်။ ဤသည်တင်ပြချက်ဟာ IETF BCP 47 ဘာသာစကားများစံကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏ပိုကောင်းထောက်ခံမှုခွင့်ပြုမယ့်အနာဂတ်ပြည်နယ်အဘို့ကိုဆန်းစစ်နေချိန်မှာလက်ရှိစနစ်ကအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ၏ 'ဆိုတဲ့ကြောင်နွားများ' ဖို့မီဒီယာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွင် HBO နှင့်အခြားသူများဘို့လမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးပုံကိုစူးစမ်း။
စက်သင်ယူ Awesome ကိုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သူကတိုင်ရဲ့ (နှင့်အမြဲတမ်းသူများဖြစ်ကြလိမ့်မည်) အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအကြောင်း
ရိုဒရီဂို Coelho, Insight ကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာသံတောင် Insight
ဒါဟာပျက်ပြင်ဆင်ထားသညအချက်အလက်များဖွဲ့စည်းပုံဖြည့်စွက်အကြောင်းပါ။ အဲဒီအခါ, ဒစ်ဂျစ်တယ်မော်ကွန်းနဲ့အတူလက်တွဲပြီးကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သတငျးကောငျးကိုယခုစက်သင်ယူနှင့်၎င်း၏ခေတ်မီဆန်းပြား algorithms အထင်ကရအဆောက်အ detect ကလည်း, ပိုပြီးခံရဘာမှတ်တမ်း, အရာဝတ္ထုတံဆိပ်ကပ်မျက်နှာများကိုအသိအမှတ်မပြုနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ခံရဖို့မီတာဒေတာ၏သိသာထင်ရှားသောပမာဏကို generate ။ သို့သော် metadata ကိုသူ့ဟာသူမလုံလောကျပါပဲ။
အဆိုပါရည်မှန်းချက်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲပုံ၏အတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်အစဉ်အမြဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးတတ်နိုင်သမျှလွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်စွာသကဲ့သို့ထိုသူတို့ကိုငါလမ်းညွှန်နှင့် curate ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုပါပဲ။ metadata ကူညီပေးသည်။ ဒါပေမယ့်လည်းငါတို့ရဲ့အလုပ်, ပိုမိုလွယ်ကူလျော့နည်းနာကျင်စေသည်အားကောင်းတဲ့ User Interface ကတဆင့်, စာရွက်စာတမ်းများ, ရုပ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများပမာဏကိုင်တွယ်၏ထိရောက်သောနှင့်အမြင်အာရုံနည်းလမ်းရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငါတို့အဘို့အ သာ. ကောင်း၏အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်ပိုကောင်းအကြောင်းအရာဆိုလိုသည်။
စက်သင်ယူ, Awesome ကိုဖြစ်ပါတယ် စည်းရုံးရေးနှင့်၎င်းတို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်မော်ကွန်းတိုက် curating, ဆန်ဖရန်စစ္စကို Giants နှင့်အတူအလုပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစာတမ်းဖတ်ပွဲထိန်းသိမ်းရေးအပေါင်းအဖေါ်များသံတောင်နှင့်အနောက်ဒစ်ဂျစ်တယ်နေဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှဖန်ဆင်းလျက်ရှိ၏ ရွှေငွေ DFT, Deluxe, နှင့် Prasad ပံ့ပိုးကူညီ, ImagePro နှင့်ချိပ် Group မှပံ့ပိုးကူညီ; နှင့်ကြေး Fotokem, Kodak နှင့်ပံ့ပိုးကူညီ NBCUniversal StudioPost, Fujifilm, AVP နှင့် Chesapeake စနစ်များ။
, Das များအတွက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအလည်အပတ်ခရီးမှတ်ပုံတင်ရန် www.digitalassetsymposium.com.
AMIA ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ THE ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစာတမ်းဖတ်ပွဲ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor post ကိုထုတ်လုပ်မှု လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-05-30
ယခင်: ရှက်ဖီးအတွက် New Virtual Animation ရဲ့စတူဒီယိုနှင့်အတူရေခူရုပ်ပုံများကိုချဲ့ထွင်စစ်ဆင်ရေး
နောက်တစ်ခု: Appear TV သည်၎င်း၏ X Platform အတွက် AN Complex 2019 တွင်ချုံ့နိုင်သောစွမ်းရည်ကိုချဲ့ထွင်သည်